နေမဝင်တဲ့ မြို့ နှင့် ၂၄နာရီပတ်လုံး နေမမြင်ရတဲ့မြို့ - Update News
နေ့ ၆ လ၊ ည ၆ လ လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ တချို့ကလဲ အဲ့ဒီ့ဆိုလိုရင်းကို မကြာခဏ လာမေးကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်…၊ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသတွေမှာ တကယ်တော့ နေ့ ၅ လ နဲ့ ည ၅ လစီရှိကြပါတယ်။
ကြားထဲက ၁ လစီကတော့ ရာသီကူးပြောင်းတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ..??? ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျမ်းမျှ ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမ်းစောင်းပြီး နေကို လှည့်ပတ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသ (၂) ခုရှိပါတယ်။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဟာ အာတိတ် စက်ဝန်းဒေသဖြစ်ပြီး..၊ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကတော့ အန္တာတိက (အန္တာတိတ်စက်ဝန်း) ဒေသဖြစ်ပါတယ်။နေရောင်ခြည်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ အီကွေတာရပ်ဝန်းဒေသ (တနည်း) အလယ်ပိုင်းကို အဓိက ကျရောက်ပြီး.. နေရောင်ခြည်ကျရောက်တဲ့ဘက်ဟာ နေ့ဘက်ဖြစ်ပြီး..၊ နေရောင်ခြည် မရှိတဲ့ဘက်ဟာ ည ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၀-၂၂ ရောက်တိုင်း ဥတ္တရ (မြောက်) ယဉ်စွန်းချိန် ကျရောက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁-၂၂ မှာတော့ ဒက္ခိဏ (တောင်) ယဉ်စွန်းချိန် ကျရောက်ပါတယ်။ အခုလို ဇွန်၊ ဇူလိုင်လ များမှာ အီကွေတာမှ အထက် (မြောက်) သို့ တက်လေလေ.. နေနှင့် ထိတွေ့ချိန် (တနည်း) နေ့အချိန်များလေလေဖြစ်ပြီး၊ အီကွေတာမှ တောင်ဘက်သို့ ဆင်းလေလေ ညအချိန် ပိုများလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသကတော့.. နေနဲ့ အစဉ်အမြဲ ထိတွေ့နေတဲ့အတွက် ၂၄ နာရီလုံးလုံး နေ့ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာတိတ်စက်ဝန်း (တနည်း) မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ နော်ဝေး နိုင်ငံနဲ့ ဖင်လန် နိုင်ငံရဲ့ ဒေသအချို့၊ ရုရှား၊ ကနေဒါ နဲ့ ဂရင်းလန်မြောက်ပိုင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ နော်ဝေးနိုင်ငံ Svalbard မြို့ငယ်လေးမှာဆိုလျှင် နွေရာသီ ရက် (၆၀) လုံးလုံး နေမဝင်ပဲ၊ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသတစ်ခုလုံးဟာ နှစ်စဉ် ဧပြီလ မှ သြဂုတ်လအထိ နေကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
ါပေမယ့်လဲ.. အောက်တိုဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိကျပြန်တော့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး နေကို မမြင်ရပြန်ပါဘူး။ မတ်လ နဲ့ စက်တင်ဘာ လတွေမှာတော့ နေရောင်ခြည်ဟာ အီကွေတာပေါ်ကို တည့်မတ်စွာ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် နေ့ နဲ့ ည အချိန် တူညီကြပါတယ်။ အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်
သန့်ဦး (အာကာသနှင့် စကြဝဠာ သင်ထောက်ကူ)
ေန႔ ၆ လ၊ ည ၆ လ လို႔ ေျပာၾကတာ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ကလဲ အဲ့ဒီ့ဆိုလိုရင္းကို မၾကာခဏ လာေမးၾကပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္…၊ က်ေနာ္တို႔ ကမာၻရဲ႕ ဝင္႐ိုးစြန္း ေဒသေတြမွာ တကယ္ေတာ့ ေန႔ ၅ လ နဲ႔ ည ၅ လစီရွိၾကပါတယ္။
ၾကားထဲက ၁ လစီကေတာ့ ရာသီကူးေျပာင္းတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ..??? ကမာၻႀကီးဟာ ပ်မ္းမွ် ၂၃.၅ ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းၿပီး ေနကို လွည့္ပတ္ေနပါတယ္။ ကမာၻမွာ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသ (၂) ခုရွိပါတယ္။ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းဟာ အာတိတ္ စက္ဝန္းေဒသျဖစ္ၿပီး..၊ ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းကေတာ့ အႏၲာတိက (အႏၲာတိတ္စက္ဝန္း) ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ေနေရာင္ျခည္ဟာ ကမာၻရဲ႕ အီေကြတာရပ္ဝန္းေဒသ (တနည္း) အလယ္ပိုင္းကို အဓိက က်ေရာက္ၿပီး.. ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္တဲ့ဘက္ဟာ ေန႔ဘက္ျဖစ္ၿပီး..၊ ေနေရာင္ျခည္ မရွိတဲ့ဘက္ဟာ ည ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ၂၀-၂၂ ေရာက္တိုင္း ဥတၱရ (ေျမာက္) ယဥ္စြန္းခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၁-၂၂ မွာေတာ့ ဒကၡိဏ (ေတာင္) ယဥ္စြန္းခ်ိန္ က်ေရာက္ပါတယ္။
အခုလို ဇြန္၊ ဇူလိုင္လ မ်ားမွာ အီေကြတာမွ အထက္ (ေျမာက္) သို႔ တက္ေလေလ.. ေနႏွင့္ ထိေတြ႕ခ်ိန္ (တနည္း) ေန႔အခ်ိန္မ်ားေလေလျဖစ္ၿပီး၊ အီေကြတာမွ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆင္းေလေလ ညအခ်ိန္ ပိုမ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသကေတာ့.. ေနနဲ႔ အစဥ္အၿမဲ ထိေတြ႕ေနတဲ့အတြက္ ၂၄ နာရီလုံးလုံး ေန႔ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အာတိတ္စက္ဝန္း (တနည္း) ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံနဲ႔ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအခ်ိဳ႕၊ ႐ုရွား၊ ကေနဒါ နဲ႔ ဂရင္းလန္ေျမာက္ပိုင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ Svalbard ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမွာဆိုလွ်င္ ေႏြရာသီ ရက္ (၆၀) လုံးလုံး ေနမဝင္ပဲ၊ ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း ေဒသတစ္ခုလုံးဟာ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလ မွ ၾသဂုတ္လအထိ ေနကို ၂၄ နာရီပတ္လုံး ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
ါေပမယ့္လဲ.. ေအာက္တိုဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိက်ျပန္ေတာ့ ၂၄ နာရီပတ္လုံး ေနကို မျမင္ရျပန္ပါဘူး။ မတ္လ နဲ႔ စက္တင္ဘာလေတြမွာေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ဟာ အီေကြတာေပၚကို တည့္မတ္စြာ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေန႔ နဲ႔ ည အခ်ိန္ တူညီၾကပါတယ္။ အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္
Previous Article တေပြီလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက သူမအနေနဲ့ အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းပြသဖို့ အုပ်ဂူကိုပြန်တူးပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်
Next Article ကျွန်မ နေနိုင်နေပါပြီ အရင်လို ဖုန်းမဆက်လို့လဲ သိပ်ပြီး ဝမ်းမနည်းတော့ဘူး
လူအများစိတ်ဝင်စားပြီး စျေးရောင်းကောင်းစေရန်အတွက် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုပြပြီး ဈေးရောင်းတဲ့ မိန်းမချောလေး
US ရဲ့ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး ရေဒါပျော်တိုက်လေယာဉ်အသစ် (Bird of Prey)
သတို့သမီးက ရည်းစားဟောင်းကို ပွေ့ဖက်ပြီးငိုခဲ့လို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့သတို့သား
ဖြူစင်အပြစ်ကင်းပြီး ချိုမြိန်လွန်းတဲ့အလှတရားကြောင့် နတ်သမီးပုံပြင်ထဲကနတ်သမီးတစ်ပါးအဖြစ် တင်စားခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး
ည၈နာရီကျော်လောက်က သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
ယူရို 20000 ကျော်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဝက်ပန်းချီဆရာ Pigcasso ရဲ့ပန်းချီကား